VOA-du maxay Fitno ula doonaysaa Jubooyinka? | Shabakada Alshahid
VOA-du maxay Fitno ula doonaysaa Jubooyinka?
Added by Webmaster on October 5, 2012.
Mogadishu (Alshahid)- Waa iska caadi in marar badan la maqlo dad u doodaya ilaalinta xuquuqda saxafadda ama saxafiga, laakiin waxaa is weydiin mudan, maxaa laga yeelayaa hadii saxaafaddi ama suxufigiba ka shaqeeynayo argagixinta bulshada ama uu noqdo shiddo iyo baas-abuur. Mase jirtaa xuquuq iyo waajibaad saaran saxaafadda ama suxufiga oo looga fadhiyo inuu ilaaliyo?
Jawaabta qeybta dambe ee su’aashu waa haa, saxafiga waxaa saaran waajibaad ah ilaalinta hufnaanta shaqadiisa warbaahineed iyo weliba ilaalinta xuquuqda bulshada , sida isagU u jacel yahay in loo dhowro xaqqiisa.
Laakiin nasiib darro sida ay u jiraan kooxo dhiigya-cab ah oo ku faana dhiiga dadweynaha sida Al-qaacida ayaa waxaa jira idaacado ku bulaala dhiiga dadweynaha.
Idaacadda VOA-da laanteeda afka soomaaliga oo ah idaacad caalami ah islamarkaana loo hanweynaa in laga helo warar hufan oo ka madaxbanaan dhinacyada Soomaalida ayaa waayahan dambe isu bedeshay meel loo adeegsado dano gaar ah islamarkaana khatar ku ah ammaanka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolada Jubooyinka iyo weliba dowlada aan dariska nahay ee Kenya.
Tan iyo markii Ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida u soo dhawaaden magaalada Kismaayo, VOA waxay qaaday olole ballaaran oo lagu tilmaami karo shar-abuurnimo iyo isku dir bulshada ku dhaqan Jubooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo.
Markii hore waxaay ku dadaashay Idaacaddu iyadoo kaashanaysa Wariyayaasheeda fashilinta xoreynta Magaalada Kismaayo, hadana waxay usii dhaqaaqday khal-hkalinta ammaanka magaalada iyo in laisku dhufto qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed si dhiig badan u daato oo markaa loo xaqiijiyo danaha gaarka ah ee ay iyada iyo kuwa la safaniba ka leeyihiin qorshayaashaasi.
Intiini la socotay maalmihii ugu dambeeyay idaacadda VOA waxay dhabarka ka tuurtay anshixii saxaafadda, waxay baahisay ilaa hadana wadaa barnaamijyo iyo wareysiyo qorsheysan oo dhammaantood ka dhan ah ammaanka magaalada Kismaayo.
Barnaamijyadaas waxaa inta badan daadihiya wariyayaasha kala ah: Falastiin Ahmed Iimaan, Sahra Abdi Ahmed iyo Maryan maxamuud Barre. Dulucda iyo ujeedada laga leeyahayna waxay noqonaysaa sidaba ka muuqata in la abuuro Jawi colaadeed, in shacabka argagax lagu abuuro, in shacabka iyo ciidamada la iska horkeeno, in la bixiyo sawir ah in magaalada ay qabsadeen Ciidamada Kenya iyada oo laga xayuubinayo magaca AMISOM,sidoo kale inay weheliso beel xulufo la ah oo ay waajib tahay in loo arko cadow ku soo duulay magaalada Kismaayo, iyo in duulaan lagu yahay qabaaillo ama qabiil gaar ah, IWM.
Waxaan ku soo koobayaa VOA waxaa ka socda barnaamijyo iyo ereyo wasakheysan oo xambaarsan dhagar iyo khiyaano ka dhan ah Shacabka Jubooyinka, waxaa markhaati ka ah carabadooda.
1.Tusaale, Halkan hoose waxad ka dhageysan kartaa iyaga oo ciidamada AMISOM ee dalka Kenya ku tilmaamaya kuwa wata shaarka AMISOM, oo macnuhu yahay AMISOM ma aha.
03. oktobar 2012, idaacadii galabnimo:
2. Sidoo kale waxad maqli doontaa iyaga oo ku sifeynaya Ciidamada Dowlada Soomaaliya ee Jubooyinka kuwa sita Shaarka Ciidamada Dowlada Soomaaliya. Intaas waxaa dheer waxad moodaa in loo igmaday maamul u sameynta magaalada Kismaayo.
Waxaa Is-waydiin mudan Dowlada mareykanka waa dowlad aqoonsan kharashna ku bixisa ciidamada AMISOM ee ka howlgala Jubooyinka, sidoo kale waxay aqoonsantahay ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo weliba dowrka muhimka ah ee ururka Raskambooni, VOA waa idaacad ku hadasha afka dowlada mareykanka, marka maxaa lagu fasiri karaa ujeedada VOA laanteeda afka Soomaaliga???
Dhinaca kale maxay tahay danta ugu jirto in lagu dagaalamo Kismaayo, maxayse tahay danaha khaaska ah ee ay VOA-du ka leedahay Kismaayo?
2 Responses to VOA-du maxay Fitno ula doonaysaa Jubooyinka?
NUUR KAMSUUMA October 9, 2012 at 6:57 pm
War angaa yaab aragnay oo hada bishaarow ma waxaad dooneysaa in xaqiiqda jirto aan bulshada loo sheegin iyo xogta dhabta ah ee jubooyinka kajirto ciidamada kenya waxa ay yihiin waan ognahay iyo ugeedada ay usocdaan taas keenyaatiga ayaa qirsan ciidamada la socdo gaar ahaan kuwa raas kaambooni lagu sheego soo ciidan qabiil maahan taasina waa been miyaad leedahay raaskaambooni kismaayo maxaa ka galay ninka hogaamiyaha u ah axmed madoobe xataa waa nin somali galbeed ah ciidanka magaca raas kaambiini huwana woqooyi galbeed ayaa laga soo qoray badigood kuwo deegaanka udhashay ma ahan ee adiga horta xanuunka qabyaalada ku haayo inta aad iska saarto markaasi wax soo qor
ee umadana beenta ka dhaaf ciidan beeleed iyo waxaasi xiligooda waa laga soo gudbay dowlad ayaan leenahay kismaayo maamulkeeda iyo guud ahaan jubada hoose dowlada ayaa u xilsaaran ciidamo beeleedna boos ugama banaana waxii aan ciidan dowladeed ahayna hubka ayaa laga dhigayaa dhaqan celis ayaa loo dirayaa kii aan somali u dhalana meesha uu ka yimid ayuu u laabanaa ee idaacadaha xaqiiqda jirta soo bandhiga haku rafan adiga marka hore isa soo dahiri waxa kaa dhex guuxaayo iska soo nadiifi markaas umadda wanaag u sheeg ee xumaanta aad lameereysaneyso iska daa
mohamed abdi yusuf October 30, 2012 at 1:15 pm
kkkkkkkk walaahi waa wax lagu qoslo in saxafada waxaa foosha xun ay ku kacdo sida aan kawada dhagaysanay dan kalena malahan waxay doonayaa hurin dagaal qabiileeda iyo dib usoo celinta wixii waaya hore laga tagay oo ah qabiil iyo qabyaalad
NUUR KAMSUUMA sxb ma wanaagsan in looo hadlo sidii caruurto waxaa tahay nin wayn hubi oo kafiirso waxaa aad dhihi rabto intaadan oran .. waxaa ku tilmaamtay ciidama mudada dheer usoo halgamayay ka xoreyna magaalada kismyo ciidama alshabab
ciidama raas kaambooni waa dad udhashay deegaanka asalna u ah marka loo fiiriyo dadka manta isku haysta waa layaqaana besha mareexan marka so dagtay magalada kismayo iyo cid meshaa ku abuurtay arintaana way qoreysaa taariikhdu hadan laga benshegayn
dadka dhahaya ciidama raas kaambooni uma dhalan deegan anigu waxaaan u arkaa iney u hadlaayaan qaab qabiileed.. qabiilada daga kismaayo waxa aya kasoo kala jeedaan deegamo kala duwan hadii layiraahdo rer waliba ha loo tiiriyo meesha uu kasoo jeedo kismaayo cidna ma sheegan karto
intii aan laga saarin Alashabab magalada kismaayo cid kahadlaysay majiraan iskabada inla yiraahdo kana udhashay iyo kan uma dhalan deeganka maxaa keenay in maanla layiraahdo hadalkaas